मृत्यु नहोस्, सपनाको - विचार - नेपाल
- जीपी मैनाली
वाम गठबन्धनले स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना अघि सार्‍यो । अविकास र बेथितिबाट आक्रान्त नेपालीले दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीको सपनालाई मतदानमार्फत अनुमोदन गरे । भुइँमान्छेका सपनासँग जोडिएर विशाल जनमत प्राप्त गरेको वाम गठबन्धन अहिले सत्ताको रथ हाँकिरहेको छ ।
यसपालि चुनावमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको जित विगतका चुनावी जित–हारभन्दा धेरै अर्थमा भिन्न थियो । मतदाता सपना साकार हुने दिनगन्तीमा छन् । पुस्तैनी गरिबी उपहारमा पाएका श्रमजीवी भोकै बस्नुपर्ने–मर्नुपर्ने अभिशप्त जिन्दगीको चक्रव्यूहबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् ।
फाटेका कपडा र नाँगै खुट्टा स्कुल जाने बालकले सहज र गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गरेका थिए । उद्योगी–व्यापारी लगानीमैत्री कार्यशैली चाहन्थे । विद्यार्थी समाजवादी मोडेलको शिक्षा–सपना देखिरहेका थिए । सबैले सर्वसुलभ उपचार पाउने अपेक्षामा थिए । विदेशी भूमिमा जीवनका उर्वर दिन बिताइरहेका दाजुभाइले स्वदेश फर्कने सपना देखिरहेका थिए । न्यूनतम तलब पनि नपाएका मजदुरले काम अनुसार उचित ज्याला पाउने अपेक्षा गरेका थिए । बेरोजगारीका कारण ‘डिप्रेसन’ भोगेका शिक्षित युवाहरू रोजगार पाउने आशामा थिए ।
यसैकारण अहिलको वाम सरकार सपनै–सपनाको जालीमा घेरिएको छ । जनताले सधैँ राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँ लडे । अब यो कोर्स सकिएको छ । पहिलो पटक स्थिर र शक्तिशाली सरकार बनेको छ । जनताको विश्वाससहित देशको नेतृत्व गर्ने नेता छन् । अबचाहिँ वाम गठबन्धनले साँच्चै गर्न सक्छ कि सक्दैन ? स्वाभाविक प्रश्न हो । वाम सरकारसँग काम नगर्ने सुविधा छैन ।
वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकताको कोर्सलाई राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता ठानियो । चुनावी नारा त्यही अपेक्षा अनुसार लगाइयो । सुरुमा राष्ट्रव्यापी तालमेल, त्यसमा मिलेको सानदार सफलता र झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन यात्राका सुरुका तीन चरण थिए । अब काम गर्ने र नतिजा दिने चरण हो । यसकारण यसको पुष्ट्याइँ वाम सरकारले आफ्नो कामबाट गर्नुपर्छ ।
संविधानले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । संविधानको यो मार्गनिर्देश नै आगामी यात्राको दिशा–निर्देश हो । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषता मानिएको छ । हाम्रो समाजवादले कस्तो विकास गर्छ ? यो मूल प्रश्न हो । वाम गठबन्धनको सरकारका हरेक निर्णयले यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
अधिकांश देशले दु्रत विकास गरे पनि नेपाल अझै संसारकै अल्पविकसित, गरिब, पिछडिएको र परनिर्भर मुलुकको परिचयमै छ । यसैले अब गरिबीको परिचय बदल्नुपर्छ । अभाव मेटाउँदै सोचमा रहेको पछौटेपन हटाउनुछ । भेदभाव र असमानताको अन्त्यपछि मात्र काम गर्ने बाटो अलि स्पष्ट हुनेछ ।
यहाँ समृद्धिका धेरै आधार छन् । धेरैभन्दा धेरै श्रमशक्ति छ । आज राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास हो । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हो । वामपन्थी सरकारसँग राष्ट्रको भविष्य र जनताको सपना गाँसिएको छ । यसैको बलमा हामीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाजवादको कुरा गर्नुपर्छ ।
अब राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकासमा जोड दिन ढिला गर्नुहुन्न । आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्र अबको उद्देश्य हो । वाम गठबन्धन हुँदै अब बन्ने एकीकृत पार्टीले मजदुरको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ । किसान र श्रमजीवीलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । जनताको हितमा व्यवस्थित कार्ययोजना चलाउँदा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनता छुट्नुहुँदैन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनका लागि तीन चरणका चुनाव, नेपालमा स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि बाटो खन्ने महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् ।
यो बाटो बनिबनाउ थिएन । धेरै राजनीतिक संघर्ष, कहिले राजमार्गको दौड त कहिले गोरेटाहरूको हिँडाइपछि हामीले नेपाली जनताका चाहना अनुसारको विकास र समृद्धिको बाटो समात्दैछौँ । हामी बिलकुलै प्रारिम्भक चरणमा छौँ, निकै टाढासम्मको यात्राका लागि हामीले गाडी स्टार्ट गरेका छौँ । हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ भनेभैँm नेपालको स्थिरता, विकास र समृद्धिको यात्रा हामीले संविधान कार्यान्वयनबाट सुरु गरेका छौँ ।
ड्राइभिङ सिटमा बसेकाहरूसँग जनताको भर छ । जनतालाई आशा छ, अब गन्तव्यमा पुगिन्छ । जनता मनमा कुनै डर र भयबिना यात्रा खोजिरहेका छन् । बीच बाटोमा पुगेर इन्धन सकियो, टायर पन्चर भयो, अब अगाडि बढ्दैन भन्न पाइन्न । जनतालाई ढुक्कसँग यात्रा गराउने जिम्मा उनीहरूकै हो, जसलाई जनताले भोट दिए, विश्वास गरे र सिंहदरबार पठाए ।
कहिलेकाहीँ मानिस आपैँm सपना देख्छ, कहिलेकाहीँ अरूले देखाउँछन् । आपैँmले देखेको सपना पूरा भएन भने मानिस फेरि कोसिस गर्छ । जनता आफूले कम सपना देखेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले धेरै सपना देखाइदिएको छ । विगतका सपनाको मृत्युका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई जिम्मेवार ठानियो । नेतृत्वको कार्यशैलीलाई दोषी मानियो । तर, अबचाहिँ सपनाको मृत्यु हुनुहुँदैन किनभने हामीसँग स्थिरताको ढोका खुलेको छ । नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हामीसँग छ । अब खाँचो कौशल, दृढ इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र इमानदारीको हो ।